ကမ္ဘာ့အလှဆုံးနဲ့ အချောဆုံးအဖြစ် သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentကမ္ဘာ့အလှဆုံးနဲ့ အချောဆုံးအဖြစ် သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး
December 1, 2021 Eaint Entertainment 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချောဆုံးရယ်လို့ သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၂၁ ) ခုနှစ်ရဲ့ အချောဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်းထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ကြမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁၀ ။ Mila Kunis
အမေရိကန် သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Mila Kunis ကတော့ သူမ အသက် ( ၇ ) နှစ် အရွယ်ကတည်းက မိသားစုနဲ့ အတူ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Mila ဟာ သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွဲကောင်းတဲ့ မျက်လုံး ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာတွေကြောင့် သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အလှနတ်ဘုရားမ လို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Mila ဟာ Golden Globe Award နဲ့ SAG Award အတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၉ ။ Scarlett Johansson
Scarlett လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ MCU ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Black Widow အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသူ တစ်ယောက်လို့ အများက မှတ်မိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ မျက်နှာ အသွင်အပြင်တစ်ခုလုံးက အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ လက်ရှိမှာတော့ Scarlett ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အနုပညာကြေး အမြင့်ဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အနုပညာဆုတွေအနေနဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံး ဆု ( ၅ ) ခု အပြင် တစ်ခြားသော ဆုတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၈ ။ Gal Gadot
အပြုံးချိုချိုလေးတွေ ကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိထားတာကတော့ အစ္စရေးနိုင်ငံသူ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gal Gadot ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Gadot ဟာ Justice League ထဲက Wonder Woman အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသလို တစ်ခြားသော နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားများစွာလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ် ။
အလှအပိုင်းမှာလည်း ပြောစရာ မရှိလောက်အောင် လှပသလို ပညာရေးပိုင်းမှာ ဥပဒေ ဘွဲ့ ရရှိထားတဲ့ အပြင် အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် Gal Gadot ဟာ Forbes မဂ္ဂဇင်းက နှစ်စဉ်ရွေးချယ်တဲ့ ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၇ ။ Ariana Grande
အသံအေးအေးလေး နဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုတတ်ပြီး ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ အဆိုတော် Ariana Grande ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ကို Nickelodeon နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်ဖြည်းဖြည်း နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Billboard ထိပ်တန်း အဆိုတော် အယောက် ( ၁၀၀ ) စာရင်းမှာ နံပါတ် ( ၃ ) နေရာကို ရောက်ရှိထားတဲ့ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ကိုယ်တော် အဆိုတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Ariana Grande ဟာ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုများစွာ ရရှိခဲ့ကာ American Music Awards သုံးဆု ၊ Grammy Award တစ်ဆု၊ Nine MTV Music Award နဲ့ One BRIT ဆုတို့ကို ရရှိထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ Angelbaby
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချောအလှဆုံး စာရင်းထဲမှာ နောက်ထပ်ပါဝင်ထားတာကတော့ Angelbaby ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ သရုပ်ဆောင် ၊ မော်လ်ဒယ်နဲ့ အဆိုအတော် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် Angelbaby ဟာ ( ၂၀၁၆ ) ခုနှစ်တုန်းက Hurun Philanthropy စာရင်းရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ပရဟိတ အလှုရှင် အဖြစ်လည်း ဖော်ပြခံထားရပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Aishwarya Rai
Aishwarya Rai ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဩဇာအရှိဆုံး အနုပညာရှင်တွေထဲကမှ တစ်ဦး အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အပြာရောင် မျက်လုံးတွေနဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ မျက်နှာ အလှအပတွေကြောင့် ပရိသတ်အများအပြားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ Aishwarya ဟာ ( ၁၉၉၄ ) ခုနှစ်တုန်းက Miss World အလှမယ်ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် ထူးချွန်ဆုကိုလည်း ရရှိထားပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ချစ်ကြည်ရေး သံတမန် စတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ Margot Robbie
ကမ္ဘာပေါ်က ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး စာရင်းထဲမှာ Margot Robbie လည်းပါဝင်ပြီး ဟောလိ၀ုဒ်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် Margot ဟာ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဩဇာ အရှိဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ် အယောက် ( ၁၀၀ ) စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
သူမ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွေကတော့ Suicide Squad ၊ The Wolf of Wall Street ၊ Once UponaTime in Hollywood နဲ့ တစ်ခြားသော ဇာတ်ကားများစွာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Beyonce
ဘီယွန်းဆေး ကတော့ ( ၂၀၂၁ ) ခုနှစ်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး နဲ့ အချမ်းသာဆုံး အနုပညာရှင် တစ်ဦးထဲက ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ တေးရေးဆရာ ၊ အဆိုတော် ၊ ပရိုဂျူဆာ စတဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်တဲ့အပြင် စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာလည်း အောင်မြင်သူ တစ်ယောက်ပါ ။ ပရိသတ် အတော်များများကတော့ ဘီယွန်းဆေးကို ကြေးနတ်ဘုရားမ လို့ တင်စားကြပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်လုံး ၊ ထူးခြားလှတဲ့ ဆံပင်ပုံစံ နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ဆုပေါင်း ( ၈၀၀ ) ကျော်အတွက် ဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး Billboard Awards, Golden Globe Award နဲ့ Billboard award စတဲ့ ဆုပေါင်း ( ၄၀၀ ) ကျော်ကို ရရှိခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Adriana Lima
Victoria Secrect မော်ဒယ်တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးထင်ရှားတဲ့သူ တစ်ဦးကတော့ Adriana Lima ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Adriana ဟာ ဘရာဇီးလ် သရုပ်ဆောင် ၊ မော်လ်ဒယ် ဖြစ်ပြီး Victoria Secret ရဲ့ အရှည်ကြာဆုံး မော်ဒယ် တစ်ယောက်ပါ ။ သူမဟာ Versace, Georgio Armani နဲ့ Christian Dior တို့လို့ နာမည်ကြီး Brand Show တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ထိပ်တန်း မော်ဒယ် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်အဖြစ်လည်း သက်မှတ်ခံထားရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Bella Hadid
ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အမျိုးသမီး စာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရှိနေတာကတော့ နာမည်ကြီး မော်ဒယ် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Bella Hadid ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမေရိကန် မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Bella ဟာ Beauty Phi ရဲ့ Golden Ratio က အစီရင်ခံစာ တစ်ခုအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး အဖြစ် သက်မှတ်ခံထားရတာပါ ။ သူမဟာ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင် Brand တွေ ဖြစ်တဲ့ Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg နဲ့ Marc Jacob တို့ရဲ့ Show တွေမှာ မော်ဒယ် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ Women in the world ရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး စာရင်းကို ဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
မိန်းကလေးငယ် (၂) ဦးရဲ့အသက်ကို ကျားသစ်ရန်ကနေ အသေခံ ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ခွေးလေး
ပူစပ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားရင် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ